महामारीको राहतमा भ्रष्टाचार : कागजमा ३० किलो, हातमा ७ किलो ! - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com महामारीको राहतमा भ्रष्टाचार : कागजमा ३० किलो, हातमा ७ किलो ! - नागरिक रैबार
निमेेेेेेेन्द्र शाही/ बाजुरा ४ असार । बडिमालिका नगरपालिका–८, कोठ्याराकी बिन्द्रा रावल ३० चैत २०७६ मा कोभिड–१९ को राहत बुझ्न वडा कार्यालय पुगिन् ।
वडा कार्यालयले तयार पारेको राहत वितरणसम्बन्धी विवरणमा अहिले तनहुँमा रहेका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् ।
विवरणमा समेटिएका पविन्द्र शाहीलाई १५ केजी चामल वितरण गरिएको उल्लेख छ । तर, शाही अहिले तनहुँमा बस्छन् र उनी तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको रोजगार संयोजकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन् ।
बडिमालिका नगरपालिका–२, माझीगाउँका नन्दे दमाईको आठ जनाको परिवार छ । सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपथ्र्यो ।